MD-11 IGBO 3 ọnwa 2 izu gara aga #1728
HI, arụnyere md-11, mana enweghị m ike ịchọta bọtịnụ ị ga-etinye ugboro ugboro na runway. Enyemaka ọ bụla, biko? daalụ.
MD-11 IGBO 3 ọnwa 2 izu gara aga #1729
enwere m olileanya na enwere enyemaka ọzọ ebe a mgbe ahụ ajụjụ ikpeazụ m depụtara ebe a.
MD-11 IGBO 3 ọnwa 2 izu gara aga #1730
Ekwesịrị itinye ụda ILS na redio redio (nav1)
MD-11 IGBO 3 ọnwa 2 izu gara aga #1731
daalụ. ee, a na m eme nke ahụ, mana ụgbọ elu ndị ọzọ nwekwara bọtịnụ N'ezie.
MD-11 IGBO 3 ọnwa 2 izu gara aga #1732
Iji mee ka ILS pịa bọtịnụ akụkụ anọ nke na-esote bọtịnụ pilote aka nri n'etiti etiti autopilot panel.
MD-11 IGBO 2 ọnwa 3 izu gara aga #1767
Enwetara m ụdị nsogbu ahụ ma kwụnye MD 11
Otu choro uzo igodo maka isi okwu rwy.
Nsogbu a abụghị ebe ịtọlite ​​oge ILS dị ka nzaghachi gosiri.
Ọ bụrụ na ị dozie nsogbu ahụ biko nyefee post.
MD-11 IGBO 2 ọnwa 3 izu gara aga #1768
daalụ. Ọ na-edobe runway, site na iji ugboro ole eji anwụrụ anwụ anwụ.
MD-11 IGBO 2 ọnwa 3 izu gara aga #1770
Na mbụ SMS MD-11 ụdị jiri igwe MFD dị iche iche wee nwee ebe a na - eme ntụgharị ngosi gosipụtara. O di nwute na ngwugwu a agbanweela MFD ka ọ bụrụ ihe nlele nke Airbus ọ nweghị usoro egosipụtara na nlele ahụ. Tinye ihe izizi papmd11_v2.CAB na folda panti dezie panel.cfg maka ihe ndozi.
Ndumodu ikpe azu: site Kernow2. Ihe kpatara ya: nlele na-ezighi ezi .cab
Oge ike page: 0.251 sekọnd